Norway-Cup: Waryaa Stars oo (10-0) ku xasuuqday kooxda Trond IL. - NorSom News
Norway-Cup: Waryaa Stars oo (10-0) ku xasuuqday kooxda Trond IL.
Kooxda ku ciyaareysa magaca Soomaaliya ee Waryaa Stars, ayaa maanta ciyaartoodii koowaad ee tartanka Norway-Cup 10-0 ku xasuuqday kooxdii kasoo horjeeday ee Trond IL. Waxeyna sidaas ku qaateen sadexdii dhibcood ee ugu horeeyay tartanka Norway CUP 2017.
Waryaa Stars ayaa ka kooban dhalinyaro soomaali ah oo laga soo uruuriyay dalka Sweden iyo kuwo si toos ah looga keenay Soomaaliya.
Sanadkii hore waxey soo gaareen wareega 8-da(Qu.finalka) halkii sanadkii 2015 ay galeen kaalinta 3-aad ee dhalinyarada wiilasha ay da´doodu jirto 15 ilaa 16 sano.
Waryaa Starts ayaa maalinta bari ah ciyaari doona kulankoodii labaad, iyaga oo ka hortagi doono kooxda Pors Grenland.
Halkan kala soco natiijooyinka kooxda Waryaa Stars ee Norway Cup-ka.
Previous article(Video): Dood iyo aqoon -isweydaarsi: Sidee warbaahinta Soomaalida Norway uga qeybqaadan kartaa baraarujinta bulshada ee ololaha doorashada
Next articleAp: Ma taageereyno xero qoxooti oo laga furo Afrika